Instagram Followers jenareta ▷ ➡️ vateveri ▷ ➡️
February 28, 2019 0 mashoko 8102
Instagram ndiyo BOM application yemasocial network, ndiyo yakura zvakanyanya mumakore achangopfuura, ichisvika mazana emamirioni avanhu vanoishandisa mushandisi yayo base. Mukutanga kwayo yaive application yekukanda, kugovana mafoto uye mavhidhiyo, kubvira 2012 payakatengwa neFACEBOOK yakatanga kukura kwayo nekukurumidza.
Kubva pagore 2103, Instagram inotanga kushandiswa kubva kumakomputa uye nekutanga inotanga kuita kwezvekutsigirwa zvinotsigirwa, zvishandiso zvinoita kuti zvifadze makambani anoziva kushamwaridzana manejimendi kuishandisa senzira ye. digital marketing.
Parizvino, kana usiri pane instagram "Iwe hausipo" uye kunyangwe ichiratidzika seyakawedzeredzwa ndizvo zvazviri, vateveri vazhinji chero bhizinesi riinaro, rinowedzera kubereka. Maitiro ekuvapo uye uwane vateveri zvinobudirira? Zviri nyore kushandisa jenareta kuwana vateveri vazhinji pane instagram. Tevere isu tinokuudza iwe kuti sei.
Yakanakisa Instagram Vateveri jenareta kunyorera
Pfungwa ndeyekutora vateveri vazhinji, kunyangwe iwe uine yako pachako kana bhizinesi account, tichazvizadzisa izvozvo kuburikidza nejenareta yevateveri pane instagram emapeji kana maakaundi pawebhu.
Ndeipi sarudzo yakanyanya kunaka? Iyo yaunowana yakanyanya kugadzikana, apa isu tinokubatsira kuti uone sarudzo dziripo. Ngatitaurei nezve maficha (App)
Iyo ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa yeApple, inokutendera iwe mune yayo yemahara vhezheni yekubatanidza vateveri vako vese nerejista, uyo amira kukutevera, ndiani ari kukutevera iwe, ma profiles, anodikanwa uye mafeni. Mune vhezheni yaro yakabhadharwa, unogona kuona vateveri, ndiani akakutadzisa, vateveri vechipoko vakaita semifananidzo, unogona kutora iyo account, chinova chinhu chakakosha kuwana vateveri vazhinji. Zviwane pane iyo App Store.
Iyo inokurumidza, yemahara kunyorera tinoiwana muApp Store. Hunhu hwayo hukuru ndewekuti yakapusa uye ine hushamwari uye inotonakidza nekuti zvinoenderana nekushandiswa kwemari chaiyo yaunochinjana nekuda uye nekutevera, yakagadzirirwa maIO kana Android.
Yakagadzirirwa Iphone, chiri chikumbiro chinomhanyisa kugadzira jenareta yevateveri uye unogona kuwana yakanaka yekutevera (track) yevateveri, avo vakatumira zvikumbiro, avo vatiri kuda kutevedzera, avo vatisingade, avo vanopa mhinduro uye vakabudirira kutumira. Takariwana muAppStore.
Mapeji pane Instagram jenareta evamwe vateveri
Kunyangwe iyo App ichitibatsira kuti tiwane vateveri nemapeji paWebhu, isu tinowana mhando yevateveri kana izvo zvakafanana kutarisa kubva kumuteveri. Iye zvino tava kuzoona mamwe mapeji anogona kukubatsira iwe mukutumwa kwekuwedzera huwandu hwevateveri pane yako Instagram account.
Yakapusa uye ine hushamwari, inokurumidza, ine yemahara vhezheni iwe yaunogona kuwana zuva nezuva uye pamwe nayo kusvika pamakumi maviri anodikanwa uye gumi nevateveri vezuva nezuva, kushaikwa kweichi peji ndechekuti iwe unofanirwa kupindura ongororo nedata rako pachako. Iyo yakabhadharwa vhezheni masosi kubva makumi mana anodikanwa emifananidzo uye anosvika pa20 s s kero yewebhu iri www.mrinsta.com Unogona kubhadhara nePaypal kana makadhi echikwereti.
Yemahara nyore uye nekukurumidza, asi haisi kunyatsoita basa uye unofanirwa kuzadza zvawongororwa, kuwedzera kugoverana paTwitter uye paFacebok, mumaonero edu irikune njodzi.
Inokurumidza uye ine hushamwari, inogadzirisa zviito pa Instagram, inopa vateveri vechokwadi, ine 3-mazuva emahara ekuyedza chirongwa. Iyo yakabhadharwa vhezheni ine mana marongero e30,90,180 uye 365 mazuva ezviitiko, autofollws, autoOnfollwers, zvikamu zvakakamurwa, akapatsanurwa ma hashtag. Iwe unowana icho mukati www.whezvegart.com/
Iri peji rinokurudzirwa zvakanyanya nekuti rinokurumidza kwazvo, mitengo yakanaka, kubhadhara kwakachengeteka, ine ruzivo uye mushandisi webasa kugadzirisa chero kusahadzika kuburikidza nemaemail, basa risingazivikanwe, ndiko kuti, havaone kuti wabata sevhisi, pasina makiyi . Izvo ndezve chete kumakambani akanyoreswa
Munyika yakasarudzika, zvakakosha kwazvo kuti vakuzive uye sezvatakakuudza kare kuti kune, kana iwe uine kambani kana uchifarira kuzivikanwa, tinokukurudzira kwazvo kuti ushandise mapeji akabhadharwa, nekuti ivo vanokupa yakanyanya kunaka mhando yevateveri uye Ivo vanopa yakavimbiswa sevhisi kune vazhinji, saka kugovera chikamu chidiki chebhajeti kuti uwedzere huwandu hwevateveri kunovimbisa iwe kubudirira mune yako yekushambadzira mazano, isu tinovimbisa kuti vateveri vako, zvaunofarira uye zvaunotaura zvichawedzera zvakanyanya.
Maakaunti kana maProfayera Anotevedzera vateveri
Kana iwe usiri kuvimba nezvose izvi zvekushandisa asi uchiri kuda kuwana vateveri vazhinji, pane nzira yaungaiwana iwe pasina kubhadhara kana kushandisa chero chishandiso.
Pa Instagram pacho pane nhoroondo dzeruzhinji kwaunogona kutevera vateveri nekukurumidza kupfuura munzira dzakajairika. Ingoisa iyo #Follow4Follow tag mune Hashtag injini yekutsvaga.
Ikoko iwe unowana akateerana Instagram profiles kwauchazopihwa vateveri pasina chero danho, kuwedzera kune vateveri ava. Ivo vari 100% chaiyo. Maitiro ekuwana vateveri veaya maakaunzi ndotevera:
1.- Nzvimbo mune #follow4follow yekutsvaga injini
2.- Pinda iyo account iyo inopa yakawanda kuvimba
3.- tanga kutevera iyo account yawakasarudza
4.- mune ino account unofanirwa kuteedzera vese vashandisi vari mumutsara
5- Mushure meizvi mirira maminitsi mashoma. Izvi zvinoteedzerwa zvinotanga kukutevera
Kuita uku kunononoka kupfuura maapplication kuti uwane vateveri vepamhepo, asi zvese ndezvemugotsi mvumo nekuti zvese zvinoshanda nemaitiro akafanana echirume.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva kuti vanhu ava havawanzo kuita kumwe kutaurirana kwakadai sekuda kana makomendi, kunze kwekunge zvirimo zvako zvakanaka, vanongokutevera.
1 Yakanakisa Instagram Vateveri jenareta kunyorera
1.2 TURBO KANA
1.3 TINOTEDZESA INSINGT
2 Mapeji pane Instagram jenareta evamwe vateveri
3 Maakaunti kana maProfayera Anotevedzera vateveri
DM Instagram kana Direct Messaging Icho chii uye sei kuti uishandise?
23 Mazano Ekushambadzira pa Instagram